Ahoana no hanatsarana soso-kevitra manan-danja soso-kevitra mba hanatsarana ny SEO Amazona?
Ireo mpivarotra an-tserasera, izay vao manomboka mampivelatra ny raharaham-barotra amin'ny Amazon, tokony hahalala ny fahasamihafana eo amin'ny habaka fikarohana ao Amazon sy Google. Amazonia dia samy hafa amin'ny karoka hafa satria ny rafitra rehetra mifototra amin'ny rafitra dia mifototra amin'ny fanamafisana ny vola miditra Amazon. Ankoatra izany, ity rafitra fikarohana ity dia tsy natao afa-tsy amin'ny fikarohana fikarohana. Izany no antony mahatonga ireo mpampiasa kokoa mametraka fanontaniana "santion-javatra" momba ny fikarohana ao Amazon. Fantatr'izy ireo fa ny rafitra Amazon dia hanome azy ireo ny manan-danja indrindra amin'ny vokatra fangatahana azony raisina amin'ny tsindry iray. Midika izany fa raha miankina amin'ny toro-hevitra Google Keyword Google AdWords amin'ny soso-kevitry ny sora-baventy Amazon ianao, dia mety tsy ho azonao ny fisafidianana ny teny fanalahidy marina izay hanatsara ny fikarohana amin'ny vokatrao.
Tena mahomby ny manao fikarohana lalindalina kokoa amin'ny fikarohana lalindalina amin'ny fanentanana fanentanana Amazon. Ny lisitry ny teny fikarohana sy be dia be dia misy fiantraikany mivantana eo amin'ny varotrao sy hanatsarana ny vokatrao amin'ny Amazon SERP. Izany no mahatonga ny fakana ny fotoana hanaovana SEO tanteraka ny fikarohana teny ho an'ny vokatrao dia ho tena sarobidy ho an'ny tsipika ambany anao.
Amazon SEO soso-kevitra ankapobeny ho an'ny vokatra vaovao
Teo am-pivarotana ny fanentanana fanentanana, mila mahita soso-kevitry SEO betsaka araka izay azo atao ianao. Ireo toro-hevitra ireo dia tokony hifanaraka amin'ny fikarohana momba ny mpanjifa mety ho anao. Raha tsy manao fikarohana momba ny sokajy tsara ianao eo am-panombohana ny fanentanana fanatsarana, dia tsy ho hita amin'ny vokatra fitadiavam-pikarohana ao amin'ny Amazon ny vokatrao.
Rehefa eo amin'ny dingana voalohan'ny fampiroboroboana ny vokatrao ianao dia mila mijery ireo teny fikarohana ireo mpifaninana nasionalinao izay miezaka ny mandrindra. Azonao atao ny mindrana ireo teny ireo ary mampifanaraka azy ireo amin'ny tanjon'ny raharaham-barotra..Afaka manao izany ianao na amin'ny tanana na miaraka amin'ny fanampian'ny fikarohana karazana fikarohana toy ny Amazon Keyword Tool, Semalt Amazon SEO, na Sonar. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mamaky sy mametaka ny ASIN amin'ny vokatra avy amin'ny mpifaninana ao amin'ny barazy fikarohana ASIN. Aorian'izany, dia hahazo lisitra momba ny teny keyword TOP izay ampiasain'ireo mpifaninana nicheo ianao.
Taorian'izany, mila mametraka ny teny filamatra ianao amin'ny alàlan'ny volany fikarohana mba hahitana ireo singa mahomby indrindra ho an'ny fampiroboroboana ny lisitry Amazon. Izany dia fomba mahomby hamakiana ny lisitry ny teny fikarohana sahala amin'ny vokatrao. Ny fitaovana fikarohana fikarohana fototra dia mampiseho tombanana ho an'ny fikarohana ho an'ny sokajy voafantina tsirairay. Ity data ity dia hanampy anao hahafantatra tsara ny teny fikarohana indrindra izay tianao hampiasaina amin'ny lisitry ny fanavaozana Amazon.
Azo ekena ny handoavana ny mason-tsivana lava amin'ny teny lava satria tsy dia mifanentana loatra izy ireo ary afaka manome anao bebe kokoa ny fanamafisana ny marika amin'ny Amazon amin'ny Amazon. Ankoatra izany, ireo teny ireo dia manana ny fihenanam-pivoarana avo kokoa ary ny tahan'ny vidim-pamindrana ambany. Ny tombony iray hafa amin'ny teny fanalahadina lava dia ny fampiasana ny mpikaroka azy ireo amin'ny fikasana voafaritra kokoa. Izany no mahatonga ny fampidirana ireo teny manan-danja amin'ny teny lava sy lava amin'ny lohateninao, ny famaritana sy ny bala, dia hanintona fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny lisitra ianao.
Andramo ny miala amin'ny famerimberenana maimaimpoana satria raha ny endriky ny endri-panambadiana sy ny tokatrano ihany no ampisehoana an'i Amazon Source .